"လူတွေကြားအောင် အော်လိုက်မနော်" ဟုခြိမ်းချောက်သည်။
"မလုပ်ပါနဲ. ဖွားသင် ငါ့ကိုသော့ပေးပါ"
"သော့မရှိဘဲနဲ. ဘာဖြစ်လို.ခတ်လိုက်သလဲ၊နင်ဘာလိုချင်လဲပြော၊ငါချက်ချင်း ပေးမယ်။"
"အမယ်-ဒီလိုနဲ. ဘာရမလဲ၊စာချုပ်နဲ.ငွေငါးရာပြန်ယူချေ။ဒါတွေရမှ သော့ပေးမယ်"
"ဟောဒီရှန်တဘက်ကို ခေါင်းမြီးခြုံသွား၊မြန်မြန်ပြန်လာရင် မြန်မြန်ပေးမယ်"
"အမေပဉ္ဇင်းဒါယိကာမ လုပ်ပေးမည်ဆိုပါလျှင်၊တစ်သက်လုံး သင်္ကန်းဝတ်နှင့် အရိုးထုတ်ပါတော့မည်"
"အမယ်လေး-မောင်မင်းကြီးသား။ကျုပ်ကို မလိမ်ချင်ပါနဲ.။ပဉ္ဇင်းခံပေးရအောင်၊ပိုက်ဆံလဲ မရှိပါဘူး"
မြှပ်ထားရာက ဖော်ထမ်းခဲ့ရအောင်၊သံပုံးတစ်ပုံးသာ ပေးပါရန်တောင်းသည်။
ကျွန်တော့ဘွားအေက ဒါလောက်ပဲဆဲရုံတတ်နိုင်တော့သည်။သူကတော့ တပြုံးပြုံး တဟဲဟဲ။
Anonymous 1 April 2008 at 23:11
လိမ်ညာခြင်းကို ကြိုသိပါက ကောင်းပါသည်။ လိမ်ခြင်းသည် မည်သည့်ဘက်ကမှ မကောင်းလှပါ။
ငွေကြောင့် လိမ်ခြင်းသည် ငွေသာ ပါ၍ အကြောင်း မဟုတ်သော်လည်း ကာမ လိမ်လည်ခြင်း၊ အချစ်ကို လိမ်လည်ခြင်းသည်ကား ဆိုးရွားလှပေသည်။ လောက၌
လူကြီးလူကောင်း ဟန်ဆောင်၍ လိမ်ညာခြင်း ၊ လေးစားဖွယ်အောင် ပြုမူနေထိုင်၍ အချစ်ကို လိမ်ညာခြင်းသည် ကား မကောင်းလှပါ။
စာရေးသူအချို့ သည် လိမ်ညာကာ လက်ရှိစိတ်နေစိတ်ထားတို့ နှင့် ဆန့်ကျင်၍ ရေးသားနေသည်ကို တွေ့ ရှိပါက ဆရာကြီး ဦးသုခသည် မည်ကဲ့သို့များ ကလောင် စွမ်းပြ ပါမည်နည်း။ သိချင်လှပါတော့သည်။ ထိုကဲ့သို့ သော စာများရှိပါက မျှဝေပေးစေချင်ပါသည်။
အခုလို ဖြန့်ဝေပေးသည့် အတွက် ကျေးဇူးတင်လှပါသည်။
မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် 1 April 2008 at 23:39
မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် 1 April 2008 at 23:53
မောင်အညတရ2April 2008 at 01:57
ဦးသုခရဲ့ ဟာသ၀တ္ထုလေးတွေလည်း အရမ်းကောင်းတယ်။
myatnoe2April 2008 at 09:39
ဆရာကြီးရေးတဲ့ သက်ဝေ ကိုလဲ လွမ်ှးလှသေးတယ်။
ယုန်ကလေး2April 2008 at 11:29